Ny fikolokoloana, ny fingotra ary ny fanala ny fantsika - miaraka amin'ireto olana maro sy maro hafa ireto ny vehivavy rehetra. Izany dia noho ny fisian'ny varimbazaha, fanadiovana ary aceton dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny takelaka fantsika. Ny famerenana ny loko sy ny rafitra mahazatra dia hanampy ny ianiana iankinany.
Olona manao ahoana no tsara ho an'ny fantsika?
Tokony hofidina araka ny tena tanjon'ny fampiasana azy ny solika ilaina. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny endriky ny fambolena ny geranium, mandarin na grapefruit. Manana fantsika be marenina ve ianao ary tsy fantatrao hoe inona avy ny menaka manatsara ny hombo? Ataovy azo antoka ny fampiasana voankazo amin'ny voankazo, avocado ary abiko . Ny tompon'ireo fantsika malemy sy mavo dia tsara kokoa amin'ny fampiasana solika amin'ny menaka misy citrus.
Efa ela ve ianao nanorina trano? Karazam-bolo manao ahoana no hametahana ny fantsika ho fanamafisana izany taorian'izany? Amin'ity tranga ity, mila mampiasa menaka oliva, rameva tsotra, eucalyptus ary abiko ianao.
Sakafo ho fanamafisana ny fantsika
Azo ampiasaina amin'ny fandroana ara-pahasalamana ny menaka mba hanamafisana ny fantsika.
Sakafo miaraka amin'ny menaka fantsika
rano - 300 ml;
menaka - 5 sotro.
Atsaharo ny solika amin'ny rano mafana. Apetaho ao anaty rano mandritra ny 5-7 minitra ny rantsantanana. Sasao ny tanana amin'ny menaka ary manapaha cream.
Ny fanamafisana ny menaka fanosotra ilaina dia azo ampiana amin'ny siramamy tanana. Amin'ny fampiasana an'io fanafody isan'andro alohan'ny handehanana matory io dia hadinonao ny fahamendrehana sy ny famafana ny lavaka mandritra ny fotoana lava. Azo atao amin'ny tenanao ny krèman'ny therapeutique.
Menaka amin'ny menaka
rano 100 ml;
menaka - 50 g;
kamomila - 10 g;
menaka tena ilaina - 4 sotro.
Fenoy ranom-boankazo ny ronono maina. Rehefa mafana ny famonoana, dia tohano izany. Afangaro ny menaka 30 ml miaraka amin'ny menaka sy menaka oliva. Apetaho amin'ny vata kely ny boaty ary atsofoka tsy an-kijanona. Aorian'ny 5-7 minitra, esory ny fitoeran-javatra avy amin'ny afo, mofomamy ary manamboara solika ilaina. Afaka mampiasa io fitaovana io toy ny crème tsy tapaka ianao.
Antony mahatonga ny Feet Feet
Ny haingo fanorenana ny fantsika
Ahoana no hananganana fantsika amin'ny acrylic?
Ahoana no hamaritra ny haben'ny tongotra?
Fampiakarana ny nono
Cliffs of Mons Clint
Vavaka ho an'ny fanadiovana ny fianakaviana
Ahoana no maha-bevohoka mandritra ny fitondrana vohoka?
Voangory veselka - fitsaboana
Sary miloko volomparasy
Fifaninanana ho an'ny fialan-tsasatry ny ankizy
Fitaterana - Summer 2015
Trobôbôblaitan'ny ratsambatana ambany - fitsaboana
Aiza ny Riandranon'i Niagara?
Arahabaina ny ankizivavy vao teraka
Ity mpanao sary ity dia mamolavola ny zavatra rehetra nangatahiny, ary ny vokatra dia tsotra fotsiny!
Katy Perry dia nandeha tamin'ny daty niaraka tamin'ny vahiny tsy fantatra anarana